Dopamine ကုန်ခမ်းနေစဉ်အတွင်းပုဂ္ဂလိကအတွေ့အကြုံများ (၂၀၀၅) - သင့် ဦး နှောက်ပေါ်ရှိ Porn တွင်
Dopamine တွေပျက်စီးမှု (2005) စဉ်အတွင်းပုဂ္ဂလဒိဋ္အတွေ့အကြုံများ
comments: သိပ္ပံပညာရှင်များကျန်းမာနုပျိုလူ dopamine လျှော့ချ။ သူကရောဂါလက္ခဏာတစ်ခုခင်းကျင်းခဲ့ရတယျ။ porn စွဲမကြာခဏဆုတ်ခွာစဉ်က, ဒါမှမဟုတ် porn အစည်းအဝေးများအကြားအလားတူရောဂါလက္ခဏာများ (သို့မဟုတ်ထိုထက်ပိုပျော့ဗားရှင်း) ခံစားရသည်။ အဆိုပါရောဂါလက္ခဏာအနိမ့် dopamine receptors (D2) မှဖြစ်ပေါ်မယ့်အစား (အဖြစ်?) စခွေငျးငှါအနိမ့် dopamine ။
နံနက် J ကိုစိတ်ရောဂါကုသမှု 162: 1755 စက်တင်ဘာလ 2005 Doi: 10.1176 / appi.ajp.162.9.1755 © 2005 American Psychiatric Association
LIEUWE De Haan, MD Ph.D. , Jan BOOIJ, MD Ph.D. , JULES LAVALYE, MD Ph.D. , တီဗန် AMELSVOORT, MD Ph.D. နှင့် Don LINSZEN, MD PH သည် .D ။ အမ်စတာဒမ်, နယ်သာလန်
Editor ကိုရန်: မူးယစ်ဆေး alphamethylpara tyrosine (AMPT) နဲ့စူးရှ dopamine လျော့ကျ induces သောပါရာဒိုင်း, tyrosine hydroxylase ၏ inhibitor တစ် Reversible လုပ်, Vivo အတွက် endogenous dopamine (2) က striatal dopamine D1 receptors ၏ထေိုအကဲဖြတ်ရန်ကိုအောင်မြင်စွာအသုံးပြုခဲ့သည်။ ဤတွင်ကျနော်တို့တဦးတည်းကျန်းမာစေတနာ့ဝန်ထမ်းအတွက်စူးရှ dopamine ကွယ်ပျောက်သွားစေခြင်းဖြင့်သွေးဆောင်ဟာသိသိသာသာပုဂ္ဂလဒိဋ္အတွေ့အကြုံများကိုဖော်ပြရန်။ သူတို့ကစိတ်ရောဂါလက္ခဏာတွေတစ်ခုလုံးရောင်စဉ်ထည့်သွင်းခြင်းနှင့်ကွဲပြားခြားနားသည့်အဓိကစိတ်ရောဂါမမှန်ဖို့ dopaminergic စနစ်၏အလှူငွေမီးမောင်းထိုးပြ။
အစောပိုင်းကဖော်ပြထားသကဲ့သို့ကျွန်ုပ်တို့၏လေ့လာမှု၌, dopamine တွေပျက်စီးမှု (4.5), 25 နာရီအတွင်း 1 ဆ AMPT ၏ပါးစပ်အုပ်ချုပ်မှုအားဖြင့်အောင်မြင်ခဲ့ပါသည်။ Striatal D2 receptors အဆိုပါ bolus / စဉ်ဆက်မပြတ်ပြုတ်ရည် [123I] IBZM technique ကို (1) ကို အသုံးပြု. အခြေခံမှာစူးရှသော dopamine ကွယ်ပျောက်သွားပြီးနောက်အကဲဖြတ်ခဲ့ကြသည်။ သိမ်းယူမှု, ပြန်လည်တည်ဆောက်ရေးနှင့်ယခင်က (2) ဖော်ပြထားသကဲ့သို့ထုတ်လွှတ်တွက်ချက် tomography data တွေကိုဖျော်ဖြေခဲ့ကြသည့်တစ်ခုတည်းသောဖိုတွန်၏ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ။
မစ္စတာတစ်ဦးကတစ်ဦး, ကျန်းမာ extraverted အလွန်ကောင်းစွာကသူ့မိသားစုထဲမှာပင်အသေးအဖှဲစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအခက်အခဲများသို့မဟုတ်စိတ်ရောဂါမမှန်ခြင်းမရှိဘဲ 21 နှစ်အရွယ်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာကျောင်းသားလည်ပတ်ခဲ့သည်။ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ပုံစကေးရမှတ်မိမိကို Global အကဲဖြတ် 97 ဖြစ်ခဲ့သည်။ Written အကြောင်းကြားခွင့်ပြုချက်ကျနော်တို့သူ t = 750 နာရီ (0) မှာ AMPT MG 1 ၏ပထမဦးဆုံးထိုးစတင်ခဲ့ပြီးနောက်အလိုအလျောက်ပုဂ္ဂလဒိဋ္အတွေ့အကြုံများဖော်ပြခဲ့သည်ကိုဖော်ပြရန်လိမ့်မယ်မစ္စတာအေရာမှရရှိသောခဲ့သည်။
7 နာရီအတွင်းမှာမစ္စတာတစ်ဦးကသူ့ကိုယ်သူနဲ့သူ့ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်အကြားပိုပြီးအကွာအဝေးခံစားရတယ်။ လှုံ့ဆော်မှုလျော့နည်းသက်ရောက်မှုရှိခဲ့ပါတယ်; အမြင်အာရုံနှင့်အကွားနိုငျလှုံ့ဆော်မှုလျော့နည်းချွန်ထက်ခဲ့ကြသည်။ သူကလှုံ့ဆျောမှုနှင့်မောပန်းခြင်း၏ဆုံးရှုံးမှုကြုံတွေ့။ 18 နာရီအတွင်းမှာသူအခက်အခဲနှိုးထခြင်းနှင့်ပင်ပန်းနွမ်းနယ်ခြင်းတိုးပွားလာခဲ့; သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်လှုံ့ဆော်မှုမှိုင်းသလိုပဲ။ သူကစကားနည်းသည် fluency ရှိခဲ့ပါတယ်။ 20 နာရီအတွင်းမှာသူရှုပ်ထွေးခံစားရတယ်။ သူကသူ့ရက်ချိန်းမတိုင်မီတင်းမာနေခံစားခဲ့ရနှင့်တစ်ဦးစိတ်ကိုလွှမ်းမိုးလမ်း၌သူ၏လက်ပတ်နာရီကိုစစျဆေးဖို့တိုက်တွန်းခဲ့တယ်။
24 နာရီအတွင်းမှာမစ္စတာတစ်ဦးကအတွင်းပိုင်းနာမငြိမ်, စိတ်ကူးများ၏လေယာဉ်ခရီးစဉ်ရ၏ မိမိအစိတ်ကူးများစီရင်သလိုပဲ, သူသည်သူတို့ကိုသတိရနိုင်ဘူး။ သူကသူ့အတွေးအခေါ်များအပေါ်ထိန်းချုပ်မှုတစ်ခုဆုံးရှုံးမှုခံစားခဲ့ရသည်။ 28 နာရီအတွင်းမှာသူမူကား, ရှက်ကြောက်ခြင်းထိတ်လန့်, စိုးရိမ်ပူပန်ခြင်း, စိတ်ဓာတ်ကျသလိုခံစားရတယ်။ သူကအခြေအနေကဆက်လက်မယ်လို့ကြောက်လန့်ဖြစ်ခဲ့သည်။ ထိုအချိန်တွင် blepharospasm, မျက်နှာဖုံးမျက်နှာ, တုန်ခါမှတ်ချက်ပြုခဲ့သည်။ 30 နာရီအတွင်းမှာသူပင်ပန်းခဲ့ 11 နာရီအိပ်ခဲ့ရတယ်။ 42 နာရီအတွင်းမှာသူဆင်းရဲသားကိုအာရုံစူးစိုက်မှုရှိခဲ့ပါတယ်။ လာမယ့်နာရီမှာတော့သူကပုံမှန်ပြန်လေ၏။
မစ္စတာတစ်ဦးကပြင်းထန်စူးရှ dopamine တွေပျက်စီးမှု (27) ကိုညွှန်းသည်အခြေခံအခြေအနေနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါ AMPT ယူပြီးနောက် striatal-to-nonspecific စည်းနှောင်အချိုး 1% ပိုမိုမြင့်မားခဲ့သည်။
ဤကိစ္စတွင်အတွက်တိုးပွားလာ dopamine လျော့ကျစဉ်အတွင်းပုဂ္ဂလဒိဋ္အတွေ့အကြုံများတဲ့အကွာအဝေးထင်ရှားဆက်တိုက်ပျောက်ကွယ်သွားသည်။ ဤရွေ့ကားအတွေ့အကြုံများအနုတ်လက္ခဏာရောဂါလက္ခဏာတွေ, obsessive-compulsive လက္ခဏာတွေ, အတွေးမမှန်ခြင်း, စိုးရိမ်ပူပန်ခြင်းနှင့်စိတ်ကျရောဂါလက္ခဏာတွေတူနှင့်အဓိကစိတ်ရောဂါမမှန်အတွက် dopamine ၏အခန်းကဏ္ဍကို၏အရေးပါမှုကိုမီးမောင်းထိုးပြ။ ဟောင်းတဦးလေ့လာမှုများမှာတော့ AMPT ပုဂ္ဂလဒိဋ္ရွှင်လန်းလျော့, ပင်ပန်းနွမ်းနယ်သွေးဆောင်, စိတ်ဓါတ်များကိုလျှော့ချရန်ရှာတွေ့ခဲ့သည်, နှင့် / သို့မဟုတ် (ရည်ညွှန်း3အတွက်ပြန်လည်သုံးသပ်) အချို့သောကျန်းမာတစ်ဦးချင်းစီအတွက် extrapyramidal လက္ခဏာတွေသွေးဆောင်။
ကြောင့်စူးရှ dopamine လျော့ကျဖို့ပုဂ္ဂလဒိဋ္အတွေ့အကြုံများသိသိသာသာဖြစ်နိုင်ပါတယ်ကတည်းကကျနော်တို့ dopamine-လျော့ကျလေ့လာမှုများပါဝင်ဘာသာရပ်များယာယီ-ပေမယ့်တတ်နိုင်သမျှအကြောင်းကိုကောင်းစွာသိရှိဖြစ်ပြင်းထန်သော-ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးသင့်ကြောင်းယုံကြည်ကြသည်။
1 ။ Verhoeff NP, Kapur S က, Hussey: D, Lee က M ကို, Christensen B, Papatheodorou, G, Zipursky RB: ကျန်းမာဘာသာရပ်များအတွက် Vivo အတွက် dopamine အားဖြင့် neostriatal dopamine D2 receptors ၏အခြေခံထေိုတိုင်းတာရန်တစ်ဦးကရိုးရှင်းတဲ့နည်းလမ်း။ Neuropsychopharmacology 2001; 25: 213-223 [CrossRef] [Medline]
2 ။ Booij J ကို, Korn P ကို, Linszen DH, ဗန် Royen EA ၏: Single-ဖိုတွန်ထုတ်လွှတ် tomography iodobenzamide အိုင်အိုဒင်း-123 သုံးပြီး methylphenidate စိန်ခေါ်မှုအားဖြင့် endogenous dopamine လွှတ်ပေးရန်၏အကဲဖြတ်။ EUR J ကို Nucl Med 1997; 24: 674-677 [Medline]
3 ။ စိတ်ရောဂါနဲ့ကျန်းကျန်းမာမာလူဦးရေအတွက် Monoamine လျော့ကျ: Booij L ကို, ဗန် der AJ, Riedel WJ လော။ Mol စိတ်ရောဂါကုသမှု 2003; 8: 951-973 [CrossRef] [Medline]